SDL: Ekekọrịta Ozi Ejikọtara Gị na Ndị Ahịa Gị |wa | Martech Zone
SDL: Ekekọrịta Ozi Ejikọtara Gị na Ndị Ahịa Gị Globalwa
Taa, ndị ahịa na-achọ ụzọ kachasị ọsọ na ọgụgụ isi iji jikwaa ahụmịhe ndị ahịa na-atụgharị isi ha gaa igwe ojii. Nke a na-enye ohere maka data ndị ahịa niile na-asọba na sistemụ ahịa na-enweghị nsogbu. Ọ pụtakwara na profaịlụ ndị ahịa na-emelite mgbe niile na usoro data ndị ahịa na-akpaghị aka na ezigbo oge, na-enye echiche zuru ezu banyere mmekọrịta ndị ahịa n'ofe ụlọ ọrụ akara.
SDL, ndi okike nke Ahịa Ahụmahụ Ndị Ahịa (CXC), Na-ekwu na ndị na-ere ahịa na-ejikwa ahụmịhe ndị ahịa ha na igwe ojii nwere ikike ọ bụghị naanị ijikwa mkpọsa, mana ịmepụta usoro mmekọrịta mmekọrịta na-aga n'ihu nke na-erute onye ahịa na usoro ha. Ka anyị lelee otú nke a si arụ ọrụ:
Na vidiyo dị n'elu, ị mụtara na SDL CXC na-anapụta enweghị ntụpọ, ahụmịhe na-arụ ọrụ data n'akụkụ ọ bụla nke njem ndị ahịa - gafee ọwa, ngwaọrụ na asụsụ. Na otu ikpo okwu dabeere na SaaS, CXC na-enye ụlọ ọrụ njikwa ahụmịhe nke ndị ahịa (CX) nke ụlọ ọrụ na-eweta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọdịnaya weebụ, mkpọsa, azụmahịa e-commerce, nchịkọta na ihe eji ede akwukwo. CXC jikọtara ya na SDL Language Cloud ka ndị ụdị nwee ike ịbawanye ohere ha na ndị ahịa na-emekọrịta asụsụ na ọdịbendị ha.
SDL Customer Experience Cloud (CXC) bụ ikpo okwu teknụzụ jikọtara ọnụ nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịnapụta enweghị ntụpọ, ahụmịhe nke data na-enye ndị ahịa n'akụkụ ọ bụla nke njem ịzụrụ - gafee ọwa niile, ngwaọrụ na asụsụ. 72 n'ime ụdị 100 zuru ụwa ọnụ na-eji teknụzụ SDL iji nye ahụmịhe ndị ahịa ka elu.
Otu uzo ikpo okwu nke SDL na-enye ndi ahia ahia echiche di nma banyere mmekorita ndi ahia ha. Site n’otu ebe otu akara pụrụ ịhụ ịdị irè nke usoro ya ma mee mgbanwe niile na-agbanwe agbanwe n’etiti mmekọrịta ndị ahịa niile, ma ọ bụ buru ụzọ ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Nke a bụ ihe atụ nke njirimara CXC njirimara:
SDL CXC na-ekwe nkwa ụzọ dị mfe ma dị mfe maka ndị ahịa iji soro ndị ahịa ha na-emekọrịta ihe ma nye ha ike:
Mee uche nke mkparịta ụka ndị na-azụ ahịa site na ịnakọta data ndị ahịa na aka ọ bụla iji gosipụta mkpebi ahịa na ngwaahịa
Napụta mgbasa ozi dijitalụ nwere ọgụgụ isi site leverage nchịkọta ma na-elekwasị anya na mmekọrịta mkpọsa maka ndị ahịa taa
Ahụmahụ hyper-metụtara site na inyocha profaịlụ na akparamagwa na ezigbo oge iji mepụta nkwupụta okwu dabere na ngwaọrụ, oge nke ụbọchị, ọnọdụ, asụsụ, akụkọ ndị ahịa na ndị ọzọ.
- SDL ahịa, Schneider Electric, onye ọkachamara na njikwa ike chọpụtara na otu-ikpo okwu na igwe ojii na-eme ka imezu ebumnuche ha nke ịnye ndị ahịa dị n'otu na enweghị nsogbu. Companylọ ọrụ ahụ dịgasị iche iche karịa mba 100 na ọtụtụ ngalaba azụmahịa. Ha chere otu ihe ịma aka zuru ụwa ọnụ, ụdị azụmaahịa: Kedụ ka otu ụlọ ọrụ nwere kesaa, ngwaahịa na usoro dị iche iche siri ike kesaa, na-arụ ọrụ n'akụkụ ụwa niile, nyefee ndị ahịa na ọdịdị ala ha niile ihe dị mkpa, na-agbanwe agbanwe na ngwa ngwa.
Iji mezuo mkpa a, ha na-achọ ngwọta sitere na ntanetị nke ga-eme ka usoro ịzụ ahịa dijitalụ ha dị n'etiti, hazie ya na ahụmịhe ndị ahịa dijitalụ ya ma kwe ka ogo mgbanwe dị mma iji dozie mkpa ndị ahịa mpaghara. SDL nyere nke ahụ.
Anyị nwere obi ụtọ na-agbanwe agbanwe ahụmịhe weebụ anyị gburugburu ndị ahịa anyị na-egbo mkpa ha na-agbanwe agbanwe. Anyị kwenyere na SDL edobere nke ọma iji nyere anyị aka wepụta weebụsaịtị anyị ka ọ bụrụ ahụmịhe nke onwe anyị, na-aza mkpa ụfọdụ ndị ahịa ọ bụla. Mgbe anyị na-enye ndị ahịa a ọkwa a dị mkpa na ntanetị, ha na-enweta azịza ọsọ ọsọ maka mkpa ha, iguzosi ike n'ihe ha na-abawanye na gburugburu anyị ga-enweta mmeri. Shawn na -ere ọkụ, Onye isi oche ndị isi nke Web & Digital Marketing na Schneider Electric
Mụtakwuo banyere otu Schneider Electric na-eji SDL CXC eme ihe, Pịa ebe a. Mụtakwuo banyere SDL Customer Ahụmahụ Cloud.
Tags: obe-ọwangwaọrụ-obeasụsụ ederedeahịa data tentahịa ahụmahụ ígwé ojiinjikwa ahụmịhe ndị ahịammekọrịta ndị ahịaahịa mmekorita okirikirimmekorita nke ndi ahiacxnjikwa cxzuru ụwa ọnụizi ozi ụwahyper-mkpaike ahịa ahụmahụike ahịa ahụmahụ management ụlọọgụgụ isi dijitalụ mkpọsammekoritambaizi ozi mba ụwaozugbosaasSchneider Electricsdlsdl mmmmmmmmmmmmsdl asụsụ igwe ojiiShawn na -ere ọkụ
5 Atụmatụ na-aga nke ọma Tọghata gị Online Prospect n'ime a ahịa